Ahoana ny fomba hanatsarana ny horonantsary Youtube sy fantsona | Martech Zone
Nanohy niasa tamin'ny torolàlana fanatsarana izahay ho an'ny mpanjifanay. Na dia manamarina sy manome ny mpanjifanay izay tsy mety sy ny antony tsy mety aza izahay, dia ilaina ihany koa ny manome ny fitarihana ahoana no ahitsio ireo olana.
Rehefa manadihady ny mpanjifanay izahay dia gaga foana izahay amin'ny ezaka kely ezaka natao hanatsarana ny fisian'izy ireo Youtube sy ny fampahalalana mifandraika amin'ireo horonan-tsary nampiakarin'izy ireo. Ny ankamaroany dia mampakatra ny horonan-tsary fotsiny, mametraka ny lohateny ary mandehandeha. Youtube no motera fikarohana lehibe indrindra faharoa ao ambadiky ny Google ary koa mankasitraka ny pejy valin'ny fikarohana ao amin'ny Google Search Engine. Ny fanatsarana ny horonan-tsarinao dia hiantohana fa hita ao amin'ny karoka mifandraika ny horonan-tsarinao.
Amboary ny fantsonao YouTube
Alao antoka aloha fa mandeha ianao Customization in YouTube Studio ary araraoty ireo fiasa rehetra hanamboarana ny fantsonao.
Layout - Ataovy manokana ny tranofiara fantsonao sy ny horonan-tsary asongadinao ho an'ireo mpamerina miverina. Aza hadino ny manampy ireo fizarana asongadinao - raha manana karazana horonan-tsary ianao dia ity misy toerana tsara hanampiana ny playlists tokana misy ny horonan-tsarinao farany.
marika - Manampia sary ho an'ny fantsonao, mazàna ny sary famantaranao, voahodina ho fampisehoana sary boribory. Manampia sary banner izay farafaharatsiny 2048 x 1152 teboka fa jereo tsara ny fomba fisehoana ny sary isaky ny vokatra. YouTube dia mamela anao hijery tsirairay avy. Ampiasao ihany koa ny mari-drano video manerana an'ireo horonantsary mba hahalalan'ny marika. Ataovy ao an-tsaina fa tsy mametraka atiny amin'ny horonan-tsary tsirairay mety afenina ao ambadiky ny riandrano ianao.
Basic Info - Manomeza famaritana tsara momba ny fantsonao izay mitaona ny mpitsidika hijery sy hisoratra anarana amin'ny fantsonao. Raha vantany vao mahazo mpanjifa 100 ianao ary efa manodidina ny 30 andro ny fantsonao dia amboary amin'ny anaram-bosotra ny lalan'ny fantsonao ny URL-nao fa tsy ny lakilasy tokana omen'ny YouTube. Ary ny tena zava-dehibe dia ampio rohy mankany amin'ny fampahalalana fototra anao izay manosika ny olona hiverina amin'ny tranokalanao na fantsona sosialy hafa.
Torohevitra vitsivitsy amin'ny famokarana horonantsaryo. Ivelan'ny rakipeo sy fanitsiana ny horonan-tsary dia aza hadino ireo singa horonantsary manan-danja alohan'ny hamoahanao:
Audio - Fantatrao ve fa maro ny olona handao horonan-tsary ho an'ny olana am-peo fa tsy ny kalitaon'ny horonantsary? Aza hadino ny manoratra ny horonan-tsarinao amin'ny alàlan'ny fampitaovana audio tsara handraisana ilay feo tsy misy akony, reverb, ary tabataba any ambadika.
Intro - Ny intro mahery dia tokony hametraka ny antony tokony hanohizan'ny olona ny fijerinao ny horonan-tsarinao. Be loatra ny mpijery mijery segondra vitsy ary lasa. Ampahafantaro ny marikao ary lazao amin'ny olona ny zavatra ho nianarany raha mifikitra izy ireo.
outro - Ny fipoahana mahery vaika miaraka amin'ny antso-ho-hetsika sy ny toerana itodiana dia manakiana ny hahatonga ny mpijery anao handray ny dingana manaraka. Tena mamporisika ny URL alehanao aho, na koa ny adiresy mailaka sy nomeraon-telefaona, ao anatin'ny segondra farany amin'ny horonan-tsarinao. Hamarino tsara fa ny URL ao amin'ny horonan-tsary dia mifanaraka amin'ny URL izay fariparitanay amin'ireo dingana etsy ambany.
Fanatsarana ny horonantsary Youtube
Ity misy fihenan'ny zavatra tadiavinay rehefa mijery ny horonantsary Youtube an'ny mpanjifa:
Lohateny Video - Ny fantsonao horonan-tsary dia tokony hanome lohanteny feno teny lakile. Hatreto, ny fomba anoratanao ny lahatsarinao no zava-dehibe indrindra. Youtube dia mampiasa ny lohateninao video ho an'ny lohateny eo amin'ny pejy sy ny lohateniny. Mampiasà teny lakile aloha, avy eo ny mombamomba ny orinasanao:
Ahoana ny fomba hanatsarana ny horonantsary Youtube | Martech
Details - Vantany vao mampakatra ny horonan-tsarinao ianao, dia ho hitanao fa misy safidy maro hafa amin'ny antsipiriany momba ny fampahalalana amin'ny horonantsarinao. Raha mahasarika mpijery eo an-toerana ianao dia afaka manampy toerana amin'ny horonan-tsarinao tokoa. Fenoy ny antsipiriany rehetra azonao atao, izy rehetra dia manampy amin'ny fiantohana ny horonan-tsarinao voatanisa araka ny tokony ho izy ary hita! Aza hadino ny mandamina ny horonan-tsarinao ho playlist koa.
Thumbnail - Raha vantany vao manamarina ny fantsona YouTube misy ny laharan-telefaonao ianao dia azonao atao ny manamboatra ny tsipiky ny horonan-tsary tsirairay. Fomba iray tsy mampino hanaovana izany ny fampifangaroana ny lohateninao amin'ny sary an-tsary, ity misy ohatra iray avy Crawfordsville, Indiana Roofer miasa miaraka izahay, Cook Services Services:
URL Voalohany - Raha misy mahita ny horonan-tsarinao ary ankafiziny, ahoana no hiverenany amin'ny tranokalanao hifandray aminao? Ao amin'ny sehatry ny famaritana anao, ny dingana voalohany tokony hataonao dia ny mametraka rohy miverina amin'ny pejy fandraisana izay irinao ny olona hitsidika azy. Apetraho aloha ny URL mba hahitanao azy hatrany miaraka amin'ilay saha famaritana notapahina nataon'i Youtube.
Description - Aza asiana tsipika iray na roa fotsiny, manorata fanazavana mafy momba ny horonan-tsarinao. Lahatsary marobe mahomby no tena mampiditra an'io fandikana video amin'ny fitambarany. Zava-dehibe ny fananana atiny manohana amin'ny pejy rehetra… tsy maintsy atao ao amin'ny Youtube izany.
maribolana - Mihabetsaka ny olona no mijery horonantsary tsy mandeha ny feo. Alefaso ny horonan-tsarinao raha maka sary ianao mba hahafahan'ny olona mamaky miaraka amin'ilay horonan-tsary. Mila apetrakao tsara ny fiteny amin'ny horonan-tsarinao sy ny fandikana azy, avy eo ianao dia afaka mampakatra an SRT fisie izay mifanaraka amin'ny fotoanan'ny horonan-tsary.
Tags - Ampiasao am-pahombiazana ireo tag mba lisitra teny lakile izay tianao hahitan'ny olona ny horonan-tsarinao. Ny fanamarihana ny horonan-tsarinao dia fomba iray lehibe hampitomboana ny fahitana azy amin'ny fikarohana Youtube mifandraika.
Comments - Ny horonan-tsary misy hetsika fanehoan-kevitra avo dia avo lenta kokoa noho ny horonan-tsary tsy misy hevitra. Zarao amin'ny mpiara-miasa sy mpiara-miasa aminao ny horonantsaryo ary ampirisiho izy ireo hanisy ankihibe sy fanehoan-kevitra amin'ilay horonantsary.
Views - Mbola tsy vita ianao! Amboary ny horonan-tsarinao hatraiza hatraiza… amin'ny lahatsoratra bilaogy, amin'ny pejin-tranonkala, amin'ny tamba-jotra sosialy, ary na dia amin'ny famoahana gazety aza. Arakaraky ny haben'ny fijerinao ny horonantsarinao no hitiavan'ny olona azy. Ary ny olona dia mazàna mijery horonantsary misy fomba fijery ary mandingana ireo izay ambany isa ny fahitany azy.
Video Sitemaps - Raha tapany lehibe amin'ny tranokalanao ny horonan-tsary dia azonao atao ihany koa ny maniry ny hamorona sitemap video rehefa mamoaka azy ireo amin'ny tranokalanao na bilaoginao. Ny atiny video dia misy pejy web izay mampiditra horonan-tsary, URL ho an'ny mpilalao ho an'ny horonantsary, na URL misy atiny video manta atolotra ao amin'ny tranonkalanao. Ny sitemap dia misy ny lohateny, ny famaritana, ny pejy milalao URL, ny thumbnail URL, ary ny toerana fisie horonan-tsary manta, ary / na ny URL an'ny mpilalao.
Fampahafantarana: Mampiasako ny rohy ifandraisako amin'i Rev, serivisy tsara ho an'ny fandikana video sy ny fanazavana.
Tags: caption akaikymihidy captioninggoogle webmastergoogle webmaster toolsmanatsara ny horonan-tsarinao youtubemanatsara ny youtubefisie srtsary mihidy mihidyfanatsarana horonan-tsaryvideo seositemap videofandikana videositemap video xmlFanatsarana ny fantsona YouTubefanatsarana ny youtubeYouTube Videofanatsarana horonantsary youtube